SCHWEENIE DOG MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA - EEYAHA
Schweenie Dog Macluumaadka iyo Sawirada
Dachshund / Shih Tzu ey isku dhafan oo isku dhafan
'Tanner waa isku darka Dachshund / Shih Tzu wuxuuna kudhowaad yahay 10 bilood sawirkaan. Isagu wuxuu leeyahay shakhsiyadii ugu macaanayd waana farxad inuu ag joogo. Wuxuu jecel yahay qof kasta oo uu la kulmo weligiisna ma buuqsana. Waa qof qosol badan oo ciyaar leh laakiin sidoo kale wuxuu doonayaa inuu isoo foorarsado oo uu jilicsamo. Wuxuu u janjeeraa inuu iga fadilayo ninkeyga had iyo jeer. Waa ilmahayga. Sifiican ayuu ula ciyaaraa eeygayaga kale, sidoo kale. Arrinta kaliya ee dabeecadeed ee isaga la jirta waa tababarka guriga iyo kala-go'id walaac . Taas oo noqon karta khaladaadkeyga badankiisa . '
Schweenie ma ahan eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Dachshund iyo Shih Tzu . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aaminayo dabeecadda nooc isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta isla markaana aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% nadiif ah ilaa 50% saafi ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaab badan .
'Tani waa Sam oo ah cunug 10-toddobaad jir ah. Iyadu waa Schweenie oo waa jawharad dhammaystiran !! Waxay qof walba ka heleysaa amaan maadaama ay u muuqato mid aan caadi aheyn lugaheeda gaagaaban, jirka lond iyo dhegaha waaweyn ee ubaxyada. '
Waxay qiyaastii tahay 75% suufka loo tababaray waxayna bartay inayan ooyin laakiin ay seexato habeenkii. Aad ayey u firfircoon tahay waxayna jeceshahay feejignaanta sida-ciyaaraha, koolkoolinta iyo cuncunka caloosha !! Aad ayaan ugu faraxsanahay sida ugu dhakhsaha badan ee ay u soo qaadatay amarro yaryar sida fadhi, joog iyo bawdo.
sawirada eeyaha shih poo
'Tani waa Oscar waana 9 bilood jir. Wuxuu miisaamay midig qiyaastii 10 lbs. tan iyo Nofeembar sidaa darteed waxaan u maleynayaa inuu u weyn yahay sida uu heli doono!
'Aabihiis wuxuu ahaa Dachshund hooyadiisna waxay ahayd Shih Tzu . Wuxuu leeyahay wejiga ugu qurxoon ee u oggolaanaya inuu wax badan kaga baxsado!
'Isagu waa qof jecel oo jecel inuu salaaxo, laakiin wuu madaxbannaan karaa, sidoo kale, mararka qaarkoodna wuxuu doonayaa oo keliya inuu sameeyo wax u gaar ah! Wuxuu jecel yahay inuu la ciyaaro Beagle iyo Dachshund oo iyagu midba midka kale wuu xirtaa. Waxaan ku sii hayaa isaga inta aan cuno maalintii intaanan guriga joogin sababtoo ah wuxuu jecel yahay inuu wax ku calaliyo! Waxaan isku dayay inaan dhigo irid cunug, laakiin wuu fuulayaa kana kor marayaa!
'' Tababbarka sanduuqa way fududaatay, laakiin wali walaac xoogaa ah ayuu qabaa. Markii hore wuu ooyi jiray si aan kala joogsi lahayn (waa sida ay deriskay yihiin), laakiin hadda wuu ooyayaa oo keliya markuu maqlo ninkayga iyo gudahaba haddii aanan isla markiiba ka bixin.
'' Tababarka dheriga wuxuu ahaa shaqo dhab ah markii hore, laakiin hadda waa pro. Wuxuu horeyba u jiray seddex bilood markii aan helay, runtiina uma maleynayo in kii ku noolaa uu waligii banaanka u kaxeeyay maxaa yeelay wuxuu ka baqay inuu dhinto banaanka seddexdii isbuuc ee ugu horeysay ee aan haysanay.
'Waa qof caqli badan isla markaana si dhakhso leh ayuu wax u bartaa. Aniga baray sida loo fadhiisto labaatan daqiiqo gudahood, laakiin waxaan u maleynayaa in labadayda eey kale ay caawiyeen iyagoo tusinaya sida ay u helaan daaweyntooda iyagoo fadhiya. Wuu jecel yahay inuu wax cuno wuuna iga ridi jiray baaqulikiisa gacantayda ka hor intaanan xittaa dhigin. Ka dib markii 2 habeen oo kaliya aan si dhab ah ula shaqeynayay, hada waxaan dhigi karaa baaquli isaga hortiisa mana cuni doono ilaa aan ka idhaahdo.
'Wuxuu u eg yahay inuu xishood badan yahay oo xishoodka badan yahay marka uu dadka la kulmayo, laakiin haddii aan u oggolaanno qof guriga ku jira waa qof aad u wanaagsan oo saaxiibtinimo leh. Wuxuu jecel yahay inuu lugeeyo , laakiin waa inaan isaga daawanaa maxaa yeelay wuxuu jecel yahay inuu soo qaado waxyaabo aan kala sooc lahayn oo uu sii wado. '
Timahiisa si dhakhso leh ayey u koraan sidaa darteed waxaan guud ahaan u geynaa ninka wax hagaajiya bil kasta ama labadiiba mar si aan cagihiisa u hagaajiyo oo aan u yara gooyo. Haddii aynaan ilaalinaynin inuu hagaajiyo wuxuu raad raacaa caleemo ku dhowaad mar kasta oo uu dibadda u baxo. In kasta oo ay dheertahay, timuhu marar dhif ah ayey isku dhafan yihiin waana inaan cadayo kaliya toddobaad kasta ama wixii la mid ah. Wuu ku fiicanyahay ninka caruusada oo waxay dhahdaa isagu wuu iska fadhiyaa oo wuxuu u ogolaanayaa inay ka shaqeyso isaga dagaal la'aan. Markii aan ku maydhanayno guriga wuxuu sameeyaa isla wax uun nooca fadhiya oo sugaya inay dhammaato.
'Ninkeyga iyo anigu waxaan dareemeynaa nasiib badan inaan ku yeelano nolosheena. Farxad badan ayuu noo keenayaa isagoo adeegsadayaashiisa iyo shartiisa! '
Julius the Schweenie oo 4 sano jir ah- 'Julius waxaa loo iibsaday sidii arday. Hooyadiis waxay ahayd Shih Tzu aabihiisna wuxuu ahaa Dachshund. Waxaan u maleynay inuu saaxiib wanaagsan u noqon doono Shib Tzu oo loo yaqaan Ceaser. Isagu waa eey waardiye ah oo firaaqo ah, cayaar leh, oo ah wiil hooyadiis macaan. '
Julius the Schweenie (Dachshund / Shih Tzu breed breed) markuu jiray 4 sano
'Tani waa Ace! Waa 1 1/2 sano jir. Isagu waa mid la jecel yahay oo macaan. Wuxuu ahaa eeygii abid ugu macaanaa! Isaga jimicsi samee maalin kasta adiga oo aadaya socod iyo socod . Wuu ku koolkooliyaa markasta oo aad rabto. Isagu waa eey si wanaagsan isu dheellitiran wuxuuna ku jiraa cunno wanaagsan. Ma daadinayo, tababbarkii guriguna wuxuu ahaa neecaw! Isagu waa ilaaliye, taasi waa hubaal. Waxaan aad u jecel nahay Ace yar!
Baxter the Schweenie oo jira 3 bilood — hooyadiis waa mini Dachshund aabihiisna waa Shih Tzu.
'Tani waa haweeney Schweenie oo 6 toddobaad jir ah oo lagu magacaabo Lucy (LuLu). Hooyadeed waxay ahayd Shih Tzu aabeheedna wuxuu ahaa Dachshund yar. Illaa iyo hadda, LuLu wuxuu ahaa eey aad u dhaqan wanaagsan. Ma jeceshahay in ay ku dhex milicsato guriga oo way sugi doontaa illaa aan ka soo saaro iyada. Waxay isla markiiba tagtaa dheri oo ay hesho daaweyn. Iyadu waa mid aad u ciyaareysa, xayawaannada kale ee xayawaanka ah, waxayna la yaab leedahay wiilkayga awoowga ah. Waxay ku deg degtay inay ogaato inaysan qaniini karin. Waxay sidoo kale horay u baratay inay ku sii jirto santuuqa iyadoo aan ooyin, laakiin ma dhigin iyada ilaa ay diyaar u noqoto hurdo.
Eeg tusaalooyin badan oo Schweenie ah
Schweenie Sawirada 1
wiener ey iyo chihuahua mix
iskudhafka iskeelka buluugga ah ee buluugga ah
cavalier king charles nuucyada iskutallaabta spaniel
xoolaha Australia darka adhijir Jarmal